OnceaCop ( 1993 ) - Myanmar Asian TV
OnceaCop ( 1993 )
Supercop2( 1993 )
ဒီတဈခါတော့ပရိတျသတျကွီးအတှကျ 1993မှာထှကျရှီခဲံတဲ့ HongKong Actionကား Supercop 2လေးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ
Jackie Chan ရဲ့ Police Story Series ကို မှတျမိကွဦးမှာပါ….
1992 ခုနှဈက ထှကျခဲ့တဲ့ Supercop 1 Police Story ထှကျပွီးတဲ့နောကျမှာ Michelle Yeoh နဲ့ Supercop2ဆိုပွီး 1993 မှာ ထပျထှကျလာခဲ့ပါတယျ….
ဒီကားလေးမှာတော့ တရုတျပွညျက ခမျြးသာခငျြတဲ့သူ (မငျးသား) က ဟောငျကောငျမှာ သနေတျမှောငျခိုအရောငျးဝယျလုပျပွီး ဘဏျဖောကျဖို့ ကွံစညျပါတယျ…
အဲ့လိုအခွအေနတှေကွေောငျ့ ဟောငျကောငျရဲတပျဖှဲ့က တရုတျပွညျမရဲတပျဖှဲရဲ့ အကူအညီ လိုအပျလာပါတယျ
အဲ့အခါမှာတော့ တရုတျပွညျမကနပွေီးတော့ Michelle Yeoh က စုံစမျးထောကျလှမျးဖို့အတှကျ ဟောငျကောငျကို ရောကျလာခဲ့ပါတယျ….
မငျးသားတို့သနေတျ အရောငျးအဝယျ လုပျတဲ့နောကျကို ရဲတှေ စုံစမျးထောကျလှနျးမိပွီး မငျးသားရဲ့ သှေးသောကျညီအဈကိုတဈယောကျသဆေုံးပွီး
-တရုတျပွညျမကွီးကနေ ဟောငျကောငျကို စုံစမျးဖို့ ရောကျလာတဲ့ Michelle Yeoh ကကော သူမရဲ့ မဈရှငျကို အောငျမွငျအောငျလုပျဆောငျနိုငျပါ့မလား ဆိုတာကို ဒီ Supercop2(Project S)မှာ ကွညျ့ရှုနိုငျပါပွီ….
ဒီတစ်ခါတော့ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် 1993မှာထွက်ရှီခဲံတဲ့ HongKong Actionကား Supercop 2လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
Jackie Chan ရဲ့ Police Story Series ကို မှတ်မိကြဦးမှာပါ….
1992 ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ Supercop 1 Police Story ထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Michelle Yeoh နဲ့ Supercop2ဆိုပြီး 1993 မှာ ထပ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်….
ဒီကားလေးမှာတော့ တရုတ်ပြည်က ချမ်းသာချင်တဲ့သူ (မင်းသား) က ဟောင်ကောင်မှာ သေနတ်မှောင်ခိုအရောင်းဝယ်လုပ်ပြီး ဘဏ်ဖောက်ဖို့ ကြံစည်ပါတယ်…
အဲ့လိုအခြေအနေတွေကြောင့် ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့က တရုတ်ပြည်မရဲတပ်ဖွဲရဲ့ အကူအညီ လိုအပ်လာပါတယ်
အဲ့အခါမှာတော့ တရုတ်ပြည်မကနေပြီးတော့ Michelle Yeoh က စုံစမ်းထောက်လှမ်းဖို့အတွက် ဟောင်ကောင်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်….
မင်းသားတို့သေနတ် အရောင်းအဝယ် လုပ်တဲ့နောက်ကို ရဲတွေ စုံစမ်းထောက်လှန်းမိပြီး မင်းသားရဲ့ သွေးသောက်ညီအစ်ကိုတစ်ယောက်သေဆုံးပြီး
-တရုတ်ပြည်မကြီးကနေ ဟောင်ကောင်ကို စုံစမ်းဖို့ ရောက်လာတဲ့ Michelle Yeoh ကကော သူမရဲ့ မစ်ရှင်ကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကို ဒီ Supercop2(Project S)မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ…
Translator : Cheng Ai Zhen
Actors: Athena Chu, Fan Siu-Wong, Michelle Yeoh, Wakin Chau, Yu Rong-Guang
Soliddrive.co Myanmar800 MB Download Mega.nz Myanmar800 MB Download